Periscope dia efa manolotra streaming amin'ny endrika marindrano | Androidsis
Nosoratan'i Periscope Efa niteny vao haingana aho hahafantatra akaiky azy akaiky sy ny fomba fiatrehantsika ny iray amin'ireo fampiharana izay manana mpampiasa bebe kokoa ary lasa iray amin'ireo fironana amin'izao fotoana izao. Serivisy izay miaro mizara fotoana manokana amin'ny alàlan'ny fakantsary amin'ny smartphone-nao mba hahafahanao mampita izany amin'ireo mpanaraka Twitter anao ary afaka miditra amin'ny streaming amin'ny fotoana tena izy izy ireo izay hotehirizina iray andro ao amin'ny lozin'ity orinasa ity.
Ny endrika niarahan'i Periscope nilalao hatreto dia mijidina, izay izy irery no azontsika nampiasaina hamindra ireo horonantsary ireo amin'ny fotoana tena izy ho an'ireo mpampiasa ity tambajotra sosialy ity na Twitter. Mandra-pahatongan'ny androany izay nanavaozana ny fampiharana hahafahan'ny mpampiasa azy ihany farany mampiasa horonan-tsary amin'ny endrika an-tsehatra handefa sy hijery izay nanapahan-kevitr'izy ireo fa mahaliana ny maro, ary izany dia mety hitranga amin'ny fidirana ao amin'ny Santiago Bernabéu amin'ny famaranana ny amboara na fotoana majika eo amin'ny terasin'ny bar izay misy saxophonist milalao feon-kira mahafinaritra.
1 Fotoana fakana sary sy fandefasana
2 Serivisy fironana
Fotoana fakana sary sy fandefasana
Ny majika an'ny Periscope dia ao amin'io sy io mandehana kely amin'ny lalan'ny Snapchat amin'ny fizarana sary manjavona aorian'ny segondra na minitra araka izay nofaritan'ny mpampiasa azy manokana. Io fomba fakana fotoana fohy sy fiarovana azy ireo mandritra ny andro iray mba hahafahan'ny tsirairay mahita azy io no ijanonan'ny fahalehibeazany sy izay namelany azy hanana mpampiasa be mpampiasa rehefa mandeha ny andro sy ny herinandro.
Ny hany zavatra mety tsy hita dia ny fizahan-tany na ny fomba marindrano an'ireo horonan-tsary mamela anao handefa karazana horonan-tsary hafa na farafaharatsiny mba hijerena azy ireo tsara. Ity endrika ity dia efa mifanaraka amin'ny rindranasa ary azonao ampiasaina amin'ny fanavaozana vaovao. Ny fanatsarana manodidina ity serivisy ity dia tsy teto ihany, fa ny sasany kosa tafiditra ao toy ny fahaizana mampiseho ny lisitry ny mpanaraka raiso rehefa manomboka fampielezam-peo manokana ianao.
Io fahaiza-manao io dia mora ampiasaina mizara fotoana manokana amin'ny fianakaviana satria mety ny fankalazana fitsingerenan'ny andro nahaterahana na ireo andro fialantsasatra miaraka amin'ireo ankizy eny amoron-dranomasina.
Miaraka amin'ity zava-baovao kely nefa manan-danja ity, Periscope dia manampy kely, izay teny an-dalana, endri-javatra tokony ho izy hatrany am-piandohana amin'ny fampiharana, na dia miatrika ny dingana voalohany aza isika. Dingana voalohany vitsivitsy izay nampiasàny ny lazan'ny Meerkat hifaninana aminy ary hanalavitra azy ihany, na dia ho hitantsika aza ny fahitàn'izy roa ireo hira vitsivitsy hanohy hanampiana ireo mpampiasa sy ny kalitaony.
Raha te hihaona amin'i Meerkat ianao dia afaka mandeha Eto, marina izany ny mpifaninana mendrika izay manandrana mifanohitra amin'ity rindranasa ity raha io no nahazo ny toerana voalohany amin'ny resaka mpampiasa. Nahamarika an'i Periscope io Twitter io ary nahazo izany dia namela azy hivoatra sy hahazoana mpanaraka amin'ny fomba haingana kokoa. Hihaona aminy tsy ho ela isika.
Periscope - horonantsary mivantana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Streaming » Periscope dia mahazo fanampiana amin'ny fandefasana amin'ny fotoana tena izy amin'ny endrika fizahana
Nampitandrina i Sony fa tsy dia be loatra ireo fitaovana entiny milentika